Blog-Tipping: PGA- လေလံပွဲများ Martech Zone
Blog-Tipping: PGA- လေလံပွဲများ
စနေနေ့, ဇူလိုင်လ 7, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
တွမ်ကသူ့ဘလော့ဂ်ကိုမှတ်မိရန်တောင်းဆိုခဲ့သည် PGA လေလံ။ ထိုအခါငါတာဝန်ဝတ္တရားမှဝမ်းသာတယ်! Tom ၏ဘလော့ဂ်သည်သူ၏ eBay စီးပွားရေးအကြောင်းပါ။ သူသည်လေလံများကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေသဖြင့်ပြိုင်ဘက်များများစွာထွက်လာပြီးသူ့ကိုကူညီရန်အချို့လိုအပ်သည်။
ပထမ ဦး စွာ link ပေါ်တွင် link ကိုပြင်ဖို့သေချာပါစေ နောက်ကျောကိုငါ့ဘလော့ဂ်သို့ link ကိုနှင့်အတူ post... သင် HTML မှ code သို့ပြန်ကူးယူပြီးကူးယူသောအခါတစ်ခါတစ်ရံ၎င်းသည်ကိုးကားချက်များကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။ ငါ update လုပ်ခဲ့တယ် တစ် textarea နှင့်အတူမူရင်း post ကို... အခုသင်ကတိုက်ရိုက်ကူးယူလျှင်, သူကအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်, သင်လုံးဝသင့်ပါတယ် WordPress ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပါ နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမြတ်ဆုံးရန် လွှတ်ပေး။ မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာမင်းတို့မှာအဆင့်မြှင့်တင်မှုပြproblemsနာအချို့တွေ့ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါကပဲလား။ သင် ၂.၂၁ သို့အဆင့်မြှင့် တင်၍ မရပါက ၂.၀ ဗားရှင်းသည် ၂.၀.၁၀ တွင်ဖြစ်သည်။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုမည်သို့လှည့်ပတ်ရမည်ကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့ကကိရိယာစုံတွဲတစ်တွဲမှတဆင့်ထိထိရောက်ရောက်ဒီလုပ်ပါ။ ပထမ tool သည် robots.txt ဖိုင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စာသားဖိုင်တစ်ခုမျှသာဖြစ်ပြီး crawler သည်သင်မည်သည့်နေရာတွင်ကြည့်ရှုမည်၊ မည်သည့်နေရာတွင်မည်သည့်နေရာတွင်မည်သည့်နေရာတွင်မည်သည့်နေရာသို့မည်သည့်နေရာတွင်မည်သည့်နေရာသို့ရောက်ရှိမည်ကိုသိရှိရန်စာဖတ်သူဖတ်ရန်ဖတ်သည်။ သင်ဖိုင်ကို Notepad ကိုသာသုံးပြီးသင်၏ဆာဗာသို့ FTP'ing လုပ်ပြီးဝက်ဘ်လမ်းညွှန်ထဲ၌ထည့်ပါ။
အသုံးပြုသူကိုယ်စားလှယ် - * တားမြစ်သည် - / wordpress / wp- Sitemap: http://www.pga-auctions.com/wordpress/sitemap.xml
သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များရှာဖွေနိုင်သည့်နောက်တစ်နည်းမှာ - ရွာေဖြလမ္းညႊန္။ ငါအထူးသဖြင့် 3.0b7 ကိုချစ် Google Sitemap Plugin။ ငါတောင်မှ Yahoo မှတင်သွင်းဖို့ကပြုပြင်မွမ်းမံပါတယ်! အဖြစ်ကောင်းစွာနှင့်ရေးသားသူထံသို့ကုဒ်ပေးပို့ပေမယ့်သူသေးလာမည့်ဖြန့်ချိသို့ built မထားပါဘူး။ ဒါက sitemap တည်ဆောက်ပါလိမ့်မယ်။
ယခု - သင့်တွင်ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုနှင့် WordPress ဘလော့ဂ်တစ်ခုရရှိပြီးကတည်းကအနည်းငယ်ခက်ခဲသွားသည်။ သင်သိမည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ယခု WordPress ၏နောက်ဆုံးထုတ်တွင်မည်သည့်စာမျက်နှာကိုပင်မစာမျက်နှာကို ဖန်တီး၍ သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုအခြားနေရာများတွင်ကပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ဘလော့ဂ်ထဲသို့သင်၏အခြားစာမျက်နှာများ (မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ၊ ပေါ်လစီများစသဖြင့်) ကိုရွှေ့ပြောင်းစေပြီး၎င်းကို WordPress ကိုကိုင်တွယ်စေနိုင်သည်။ အားသာချက်မှာ၎င်းတို့အားသင်၏အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်ထားသော sitemap တွင်ရနိုင်သည်။ ဤအရာကိုပြုလုပ်ရန်နှင့်သင်၏ဆိုဒ်၏အမြစ်လမ်းညွှန်ထဲ၌သင်၏ WordPress ကိုထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်အမှန်အကြံပြုလိုပါသည်။
သင်ဖန်တီးပြီးဖြစ်သောအကြောင်းအရာကိုအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဘဲဆိုက်ကိုရွှေ့နိုင်သည်။ သင်ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကမှန်ကန်သော directory ရှိ sitemap ကိုညွှန်ပြရန်သင်၏ robots.txt ဖိုင်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံပါ။
သင် eBay ကို WordPress နှင့်လည်းပေါင်းစည်းချင်ပါသည်။ ဒီမှာ ဆောင်းပါး, ထို site ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် eBay အယ်ဒီတာချုပ် ထည့်သွင်းရန် Inventory စာရင်းကိုသူတို့၏ WordPress ဘေးဘားတန်းတွင်စာရင်းပြုစုပါ.
မည်သူမျှအမည်မသိတစ်စုံတစ် ဦး ထံမှအကြံဥာဏ်ယူလို, ဟုတ်သလော ငါမင်းရဲ့ About page မှာပုံတစ်ပုံလုံးကိုငါလုံးဝတင်ထားလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အကောင်းတစ် ဦး (နောက်တာပါ) ဖြစ်ပါက၎င်းကိုသင်၏စာမူတိုင်းကိုစာမျက်နှာတိုင်း၌ထည့်လိုပေမည်။ ကင်မရာမရှက်ပါနဲ့ - လူတွေကသူတို့ဘလော့ဂ်ကိုဘယ်သူတွေကြည့်နေကြတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပြီးသူတို့ဘာတွေဖတ်နေသလဲဆိုတာသိတာကိုတကယ်သဘောကျတယ်။
သင်၏အစာကိုပြောင်းပါ Feedpress ပါ WordPress Feedburner plugin ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ဘလော့ဂ်ကို RSS မှတစ်ဆင့်မည်သူမည်မျှဖတ်နေသည်ကိုကြည့်။ သင်၏ link ကိုသင်၏ sidebar တွင်မြင့်မားသောအိုင်ကွန်ဖြင့်ထားနိုင်သည်။ သို့မှသာလူများကရှာဖွေနိုင်သည်။
။ Feedburner မှာသင့်ရဲ့ site မှာတင်နိုင်တဲ့ email subscription ပုံစံလိုမျိုးအခြားရွေးချယ်စရာတွေလည်းရှိပါတယ်။
ဒီပလပ်အင်ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့သည် နှစ် အခြား အကြံဥာဏ်များ - ရှေးရှေးတွေကိုအမြဲတမ်းထားဖို့ငါအကြံပေးချင်ပါတယ် ဆက်စပ်ပို့စ်များ Plugin သင်၏ရေးသားချက်တစ်ခုစီ၏အောက်ခြေတွင်ဆက်နွယ်သောရေးသားချက်များကိုတင်ပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်သင့်ကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မှရှာဖွေသောသူများသည်သင်၏ပို့စ်များကိုဖတ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သူတို့လိုအပ်သည်ကိုအတိအကျမတွေ့ပါကထိုအကြောင်းအရာနှင့်ထပ်တူဆောင်းပါးများကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ ဤသည်ကိုလည်းအတူကူညီလိမ့်မည် နက်ရှိုင်းသောချိတ်ဆက်မှု ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်အတွက်။
သင့် site ပေါ်တွင်ရှေးရှေးဖတ်နေသည့်အရာကိုသင်ဘယ်လိုသိသနည်း။ သင့်မှာကောင်းမွန်တဲ့ Analytics package မပါပဲ။ ငါအရမ်းအကြံပြုလိုတယ် ကလစ်နှိပ်သော Web Analytics။ Pro version ရရှိပါက WordPress plugin ကို download လုပ်၍ ရပြီးပြေးနိုင်သည်။
သင်၏ visitors ည့်သည်များမည်သည့်နေရာမှလာသည်၊ သူတို့ရှာဖွေနေသည့်အရာများစသဖြင့်များစွာသင်ယူနိုင်သည်။
ဒါဟာအားလုံးအကြောင်းပါ ရှာတွေ့နိုင်သည်တွမ် သင်မည်သို့ရှာဖွေရမည်ကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုပြောပြရန်လိုအပ်သည်။ စာဖတ်သူနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်သည်လာလိမ့်မည်။ သင်သည်ပုံများတင်ခြင်းနှင့်ရှင်းလင်းပြီးတိကျသောရေးသားချက်များရေးသားခြင်းကိုများစွာလုပ်ဆောင်သည်။ သင်၏ post ခေါင်းစဉ်များသည်ထူးခြားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုသင့်အားတွေ့ရှိလာသည်နှင့်အမျှသင်၏ဘလော့ဂ်သည်စာဖတ်ပရိသတ်နှင့်သင်၏ eBay စတိုးအရောင်းတွင်စတင်ပါလိမ့်မည်။
9:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 37
Analytics ကိရိယာသည်ဘလော့ဂ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ သို့မဟုတ်ပါကသင်၏ဘလော့ဂ်နှင့်ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုဘယ်တော့မှမသိနိုင်တော့ပါ။
ငါဤကဲ့သို့သောဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုတစ် ဦး ကိုဖတ်မှီတိုင်အောင်ငါတစ်နှစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမပါဘဲဘလော့ဂ်များရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါအရင်တုန်းက Clicky ကိုသုံးခဲ့ဖူးတယ်၊ GoStats.com သူတို့မှာပြည့်စုံတဲ့ reproting စနစ်ရှိတယ်။